हाम्रै जंगलमा काठ खेर गैरहेका छन् किन आयात गर्नुपर्‍यो ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/हाम्रै जंगलमा काठ खेर गैरहेका छन् किन आयात गर्नुपर्‍यो ?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बाहृय मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसाय गर्नुभन्दा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरी निर्यातमुखी व्यवसाय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपाली कला प्रयोग गरेर निर्यातजन्य सामग्री उत्पादन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
काठजन्य पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्नेे आवश्यक्ता नरहेको भन्दै मन्त्री भट्टले कामदार र कच्चा पदार्थ अभाव पूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । सरकार समृद्ध नपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तीका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले आयातभन्दा पनि निर्यातमुखी व्यापारमा बढावा दिने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रै जंगलमा काठ खेर गैरहेका छन् बाहिरबाट किन ल्याउनु पर्‍यो ?’
उपभोग्य सामग्री अभाब हुन नदिन सरकार लागिरहेको भन्दै अहिले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन कृषिमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । अधिवेसनमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले नेपाली बनको काठ खेर गैरहँदा विदेशी काठ आयातले मुलुकमा मुद्रा संकटको अवस्या आएको बताए ।
तोकिएको समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती